Mitantara i Sariaka, niady mafy tamin’ny Covid-19 : “Efa nionona ny vady aman-janako hoe ho faty i Neny…” | NewsMada
Par Taratra sur 10/04/2021
Sariaka, renim-pianakaviana. Mitantara ny niainany ny fahasarotana nandritra ny aretina covid-19 saika nahafaka ny ainy mihitsy. Notsaboina tetsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka izy nandritra ny 12 andro.
Iray volana nialoha ny nidirana hopitaly aho no na­nomboka tsy nahare fofona sy tsiron-kanina fa tsy no­raharahaiko fa nihinana ilay fanafody sy vitamine voalaza fa mahasitrana raha mbola tsy mafy ilay aretina.
Herinandro mialoha ny ni­di­rana hopitaly anefa no na­no­m­boka narary kibo ary ni­va­la­na ny hariva, narary be tsy za­ka ny loha, ary tampoka eo dia marary be ihany koa ny valahana. Nanakotsako ny va­tana iray manontolo. Na­nom­boka teo, henoko hoe tery be ny tratra, malemy ny tongotra ary sem­potra amin’izay. Tsy ma­intsy nentina namonjy ny ivon­toerana fandraisana ireo ma­rarin’ny Covid-19 etsy amin’ny Village Voara Ando­ha­tapenaka aho, ny 22 marsa teo.
Nahakivy tany am-piandohana anefa ny fihetsik’ireo mpitsabo sasany. Misy tena mitavozavoza ilay mpitsabo mpanampy fa ny tena mampalahelo dia izay manam-bola iha­­ny no tena voakarakara. Iza­­hay mantsy tsy niandry fa­nafody tao amin’ny hopitaly fa tonga dia nividy.
Raha ny tao amin’ny hopitaly no nandrasana dia efa ma­ty aho ohatran’izay. Nandritra ny 8 andro no tsy maintsy na­siana “Oxygène” aho. Izaho izay efa tsy nanantena ny ho velona intsony, raha ny zavatra niainako izay nandritra ny fotoana narariako sy ny nijanonako tao amin’ny Village Voara. Toy ireny any anaty lavaka mangitsokitsoka be ireny no nisy ahy tamin’ny nanomboka sempotra, tsy misy zavatra reko sy hitan’ny masoko intsony, efa nampionon-tena aho hoe, ho faty aho izany satria ny ahy tena efa “forme grave”.
Vao nipetaka ny “oxygéne” dia ohatran’ny hoe misy misintona anaty lavaka izany aho. Ny olana anefa, nisy fotoana, tapatapaka ny jiro teny Andohatapenaka, tsy iza­ho irery anefa no misy “oxygene” tao fa efa am-polony maro. Ny ahy mantsy ny “oxy­gene” ilay mandeha
amin’ny herinaratra fa vao tapaka ny jiro dia tena fijaliana ny ahy. Ohatran’ny hoe ho faty izany indray na dia mba efa nahazo hery kely aza. Ny fianakaviana sy ny vady aman-janako moa dia efa nionona hoe ho faty zany i Neny.
Izaho sady mivavaka no mampionona ny tenako. Tena mafy loatra ilay aretina, tena tsy misangy mihitsy”. Nisy fotoana tao amin’ny hopitaly, narary be mihitsy ny tratrako, ary isaky ny esorina kely ny “oxygene” dia miaka-nidina ny “Saturation” na ilay “taux d’oxygène”. Isaky ny mitsangana dia tery be mihitsy ny tratra sady marary. Io no tena nampisalasala ny mpitsabo ka tsy maintsy natao ny “Scan­ner”. Hita teo hoe misy maratra ao amin’ilay tratra de tsy maintsy nividy fanafody “an­ti­biotique” indray nanasitranana azy.
Nirarakompana ny vola
Tsy voatanisa intsony ny vola laninay tao satria misy fotoana tonga dia vidina daholo ny fanafody mandritra ny 3 andro, ohatra, mba hialana amin’ilay mivezivezy. Azo lazaina ho nandany vola ihany izahay teny amin’ny toeram-pitsaboana satria te ho sitrana, ary mbola te hiaraka hiaina amin’ny fianakaviana.
Ny tena nampalahelo ahy tao dia ny mahita ireo marary sasany matory amin’ny tany satria efa tery ny trano. Nisy marary iray izay efa sempotra be mihitsy, dia tsy nisy fandriana intsony, teo akaikiko teo amin’ny tany izy no napetraka ary nitambatra “oxygene” tamiko. Izany hoe, ilay “concentrateur d’oxygene” teo amiko iny no nitambaranay roa mandra-piandry vaha­olana.
Tsy fantatro hoe tsy maharaka ve ny “oxygène” sa toy ny ahoana ny fandaminana misy ao fa vao mainka mahakivy ny mahita ireo marary sy ilay miaina ao amin’ny hopitaly. Ny 2 avrily teo no nivoaka ny toeram-pitsaboana aho.
Rehefa hitan’ny mpitsabo fa mahazaka miaina tsy misy “oxygène” dia nalefa nody ary any an-trano no tohizana ny fitsaboana sy fikarakarana.
Hafatra ho antsika
Ny hafatro dia mitandrema fa tena marary ilay voan’ity aretina covid-19 ity. Misy mantsy ny sasany mbola tsy mino fa tena misy ilay aretina, misy ihany koa mieritreritra fa gripa tsotra na tazo mahery no mahazo azy dia rehefa sempotra sy tafiditra anatin’ny “forme grave” vao manatona mpitsabo. Aleo tsy manao dokotera tena fa raha vao misy fambara hafahafa tonga dia manatona toeram-pitsaboana. Ary farany sady lehibe indrindra, mila mametraka ny fiainantsika amin’Andria­ma­nitra, dia mila matoky Azy dia manaiky izay fitondrany fa io no tena anisan’ny nahavonjy ahy. Hajao mandrakariva ny fepetra ara-pahasalamana rehetra na aiza na aiza misy anao fa efa ao anatin’io rivotra iainantsika io mihitsy ilay aretina fa raha vao tsy mitandrina dia lavony.